saturngod – Medium
မနက်ဖြန် ဆိုရင် ​COMQUAS တည်ထောင်တာ ၅ နှစ်ပြည့်ပြီ။ ဒီနှစ်က အဆိုးရွားဆုံး နှစ်ပဲ။ မနှစ်က ဝန်ထမ်း ၂၆ ယောက် နဲ့ လည်ပတ် နေတာ အကုန်နီးပါး ရပ်ဆိုင်းသွားရသည့် နှစ်ပဲ။
မနှစ်က ဒီနှစ်ထဲမှာ ဝန်ထမ်း အယောက် ၃၀ အထိ ချဲ့မယ်လို့ မှန်းထားခဲ့တယ်။ အခန်းကျယ်သည့် Condo တစ်ခု ကို ပြောင်းမယ် ဆိုပြီး ပိုက်ဆံ တွေလည်း ဖယ်ပြီး စုထားခဲ့တယ်။ Client တော်တော်များများ နှင့် ရေရှည် plan တွေ ဆွဲထားခဲ့တယ်။ နောက်ထပ်၂ နှစ် အတွင်းမှာ အများကြီးလုပ်ဖို့ plan တွေ…
I am teaching Programming Basic with Around these days. Around is an amazing video conference app. The feature I like the most is the circle video view. So, nobody can see my background except my face.
Now, it updated some new features like vertical floating mode, drawing on the screen…
An alternative paid version that we use in our company
We are usingalot of software every day. For most of the software, we need to pay or subscribe. For the startup company, SASS costs are not cheap. Our company is using the following websites forafree alternative.
Tara.ai alternative of Jira
Tara AI | Simple sprint management designed for modern teams
We are using Tara.ai every day. It is free and…
Cloud Storage ထဲမှာ အကြိုက်ဆုံးပြောပါ ဆိုရင်တော့ Dropbox ပဲ။​ မြန်ပြီး စိတ်ချရတယ်။ Conflict တွေ ဖြစ်တာ သိပ်မရှိဘူး။ ရှိခဲ့လည်း Error ပြပေးတယ်။ Google Drive က mac မှာ ပြဿနာ အရမ်းများတယ်။ အရမ်းလည်း နှေးတယ်။ Office 365 သုံးနေတော့ One Drive က ရပေမယ့် မသုံးဖြစ်ဘူး။ Mac မှာ node.js ရဲ့ modules တွေ နဲ့ ပြဿနာတွေ တက်ပြီး error များတယ်။
Stacksocial မှာ Koofr ကို တွေ့ပြီးတော့ မဝယ်ခင်မှာ စမ်းသုံးကြည့်သေးတယ်။ အဆင်ပြေတယ်။ Google Drive, One Drive ထက် ပိုအဆင်ပြေတယ်။ Sync က တော့ နှေးတယ်။ ဒါပေမယ့် သုံးလို့ ရတယ်။ လက်ခံလို့ ရတယ်ပေ့ါ။
Koofr ကို Stacksocial မှာ lifetime အတွက် 100GB ကို $30 နဲ့ လက်ရှိ ရောင်းနေပါတယ်။ Droppbox3လစာ ပဲ ဖြစ်တော့ တန်တယ် လို့ ထင်ပြီး လက်ရှိ သုံးနေတယ်။ 250 GB ကို $60 ပေးရပါတယ်။ အခု ထက်ထိတော့ အဆင်ပြေနေသေးတယ်။ Mobile App က မကောင်းပေမယ့် သုံးလို့ ဖြစ်တယ်။
Covid-19 Day 1 to Day 15
ဒီနေ့ Covid-19 Day 16 ရောက်ပါပြီ။ 8 July 2021 က စဖျားတော့ ပုံမှန် ဖျားတာပဲ လို့ ထင်ခဲ့တာပဲ။ Covid ဖြစ်သည့် သူတောတ်တော်များများက ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပုံမှန် ဖျားတာလို့ ထင်တာပဲ။ စစ်ကြည့်မှ covid ဖြစ်နေမှန်း သိကြတာ။ Day6မရောက်ခင်တော့ ဖျားလိုက် para သောက်လိုက်နဲ့ ဘာမှ မဖြစ်။ ပုံမှန် ဖျားသလိုပဲ။ ဆေးသောက်ရင်း အစာမစား မိလို့ အစာအိမ် ထိ သွားတယ်။
Day6မှာ စပြီး ဆိုးတာပဲ။ သူများတွေ လို အနံ့မပျောက်ပေမယ့် အသက်ရှူလိုက်တိုင်း…
Photo by Melissa Mullin on Unsplash
It’s around5months after the coup happening. In these5months, so many things happen in our life. Now, Covid-19 is back and lost hope again.
I still remember when I back to Yangon, Myanmar at the last4years. At that time, there is hope. So many people…
I am using Setapp over two years already. Setapp announces the iOS for Setapp. I am using Ulysses in Mac and iOS (iPhone,iPad). In the new announcement, we need to pay extra for the iOS app. That mean, we cannot use the Ulysses for iOS with the current plan.We need…
Curl SSL Issue with Pod
I couldn’t update my cocoapod and keep getting
CDN: trunk URL couldn’t be downloaded: https://cdn.cocoapods.org/all_pods_versions_0_a_c.txt Response: Problem with the SSL CA cert (path? access rights?)
I tried so many things and it’s not working. I tried with curl and I got the following response.
curl: (77) error setting certificate verify locations brew
After researchalot , it was issue on my root certificate. Mac is using key chain for root certicicate. But ruby and curl are using file certificate under /etc/ssl/cert.pem.
So, need to open keychain from mac. Search Root under certificate.
Select All and export as pem. Name to cert.pem. After that, overwrite to under /etc/ssl/cert.pem .
After that, try agian cocoapods and it’s working back.
Published in COMQUAS
မကြာခင်မှာ COMQUAS ဟာ ၃ နှစ်ပြည့်တော့ပါမည်။ ၃ နှစ်အတွင်းမှာ ပြဿနာပေါင်းများစွာ နောက်ပြီး project အသစ်တွေ clients အသစ်တွေ meeting ပေါင်းများစွာ ကြုံခဲ့ရပြီးပါပြီ။
ပုံမှန်အားဖြင့် သောကြာနေ့တိုင်း Knowledge Sharing ကို company မှာ ပုံမှန် ပြုလုပ်နေကြပါ။ အဓိကတော့ စာဖတ်ဖို့ နောက်ပြီး တစ်ယောက် နှင့် တစ်ယောက် ဘယ်အပိုင်းကို အားသန်တယ် ဆိုတာ နားလည် ဖို့ အတွက်ပါ။
၃ နှစ် နီးပါး ဝန်းကျင်မှာ ကိုယ်တိုင် ဘာကို အလေးထားခဲ့သလဲ ဆိုတာကို ပြန်ကြည့်မိတယ်။ အဓိက ဂရုစိုက်မိတာ ၃ ခု…
Letter for employee at COMQUAS
Last2years, I started the company. There was3person in our company. After2years, we have 14 person in our company. I learnalot within2years , too.
Most of the people ask me about our company GOAL. We don’t haveagoal and never…
Husband,Father. Love to do Mobile App Developer and runningastartup in Yangon, Myanmar. Founder of COMQUAS. Creator of Rabbit Converter.